MyWiGo V8 miaraka amin'ny fakan-tsary Snapdragon 810, RAM 3GB ary fakan-tsary 21MP | Androidsis
Efa hitantsika ny fampidirana orinasa espaniola samihafa amin'ny Android misy valiny lehibe toy ireo izay angoniny BQ mihitsy isaky ny mandefa terminal vaovao eny an-tsena ianao ary avy eto mazàna isika dia miavaka amin'ny maha-vaovao lehibe ho an'ny firenentsika.
Ny MyWiGo multinational valencien dia nanolotra izay ho lohandohany amin'ity taona ity ary ity ny MyWiGo V8. Ny avo lenta izay tonga miaraka amin'ny fanambarana lehibe te-hiady amin'ny marika lehibe hafa toa an'i Apple sy Samsung. Herinandro mahery lasa izay no nanolorana azy io ary tsy azontsika hadino ny fotoana nifanaovana haneho hevitra momba ny hatsaram-panahy sy tombontsoa azo avy amin'ity telefaona marika Espaniola lehibe ity izay novolavolaina niaraka tamin'ireo singa tsara indrindra tamin'ny vidiny nifaninana, ary izany dia miresaka momba ny puce Snapdragon 810, RAM 3GB ary fakan-tsary 21MP amin'ny € 349 izahay.
MyWiGo V8 Famaritana ara-teknika
efijery 5 inch IPS LCD 441ppi
processeur Qualcomm Snapdragon 810 Octa 64-bit
Fakan-tsary Rear 21 Mpx 4K fandraketana horonantsary sy miadana
vidiny 349 euro ho an'ny kinova 16GB ary € 399 ho an'ny kinova 32GB
Rehefa avy nahalala ny mombamomba azy ara-teknika Gaga ihany isika amin'ny fahatongavan'ny terminal Espaniôla amin'ny vidiny lafo indrindra 349 euro ho an'ny kinova 16GB. Ny puce Snapdragon 810 misy fotony valo, ny RAM 3GB ao aminy, ny fakantsary misy fakan-tsarin'i Sony 21MP ary tonga miaraka amin'ny Android 5.0 no tena mampiavaka azy ary hanome ny tsara indrindra ho an'ilay mpampiasa te hanana fantsona novokarin'i orinasa espaniola izay nahalala nahita fitambarana tonga lafatra teo anelanelan'ny singa sy ny vidiny.
Tsy afaka manadino ny fakantsary mahery 21MP aoriana izay manana fahaizana raketo horonantsary amin'ny maody 4K sy maody miadana. Ny iray amin'ireo hatsarany dia ny bateria 3000mAh izay hanome ny hery rehetra ho an'io efijery 5-inch io miaraka amin'ny vahaolana feno HD. Mikasika ny famolavolana, ny farany dia premium, ultralight ary hanohizana ny fironana ankehitriny, ny teknolojia 4G LTE. Avia, ity vokatra Espaniôla ity dia tsy mahory na inona na inona.
Ankehitriny raha tsy maintsy nanonona zavatra iray izay tsy refy aho Ny hany sisa tavela dia ny manana ny telefaona eny an-tanako ary hijery ny fomba itondrana azy miaraka amin'ireo singa rehetra ao anaty tsinay miaraka amin'ny Android 5.0. Ho an'ity dia tsy maintsy hiandrasantsika isika satria ho azo avy amin'ny faha-1 amin'ny mpamosavy amin'ny tranonkala MyWigo. Smartphone iray tonga amin'ny kinova roa 16/32 GB amin'ny vidiny tsy mampino 349 sy 399 euro. Iza no afaka miteny tsia amin'ny fitaovana iray miaraka amin'ireo fiasa rehetra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » MyWigo V8, smartphone Espaniola tonga hifaninana amin'ireo tovolahy lehibe
Amin'ny sarin'ilay famelabelarana izay ilazany ireo toetra voalaza ao… snapdragon 615 no 810…. MISAOTRA